Iimvolololi ezimangalisayo zezilwanyana zeTilen Ti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imizobo yeWatercolor inendlela entle yokufumana amandla obomi, kunye nemibala enesiporho yemibala engenakho okunye. UTilen Ti igcisa elivela eSingapore eliye laba yingcali ekusebenziseni iipeyinti zecolorcol ukuya kwizakhono zazo. Los izilwanyana kwimibala yazo ebonakalayo ziyasebenza, kubonakala ngathi kuza ebomini.
UTilen Ti akakholelwa kubomi obusekhona. Imiboniso yakhe yaseSingapore iyayichasa inyani, ihanjiswe ngemibala ebonwa ngaphezulu kunokubonakalayo. Ngokucacileyo vuka ngee-shades zazo zonke imibala onokuyicinga, ii-watercolor zabo ngobuqhetseba zijika zibe ziindawo ezingaqhelekanga, ezona nguqulelo zibalaseleyo.
Uzalelwe eRaub, ePahang, eMalaysia ngo-1969, kwaye waya ISaito Art Academy ePetaling Jaya, apho waphumelela khona ngo-1992. Kwiminyaka emithathu emva kokufudukela eSingapore ngenxa yomsebenzi, waqala ukupeyinta njengomntu owayezifundisa ngo-2009, ethatha inxaxheba kumboniso womzobo 'Igalari yokuQinisa iFort' Ngo-2011, kunye 'Umboniso weNcwadi' kwiSikwere soMfanekiso njengenxalenye yomsebenzi wakhe womzekeliso. Umboniso wakhe wokuqala wedwa waboniswa eSingapore, kwaye wabanjelwa e-L'Etoile Café
I-Ti ijolise ikakhulu kwizinto ezahlukeneyo iintaka zetropiki nangona ikwapeyinti izidalwa ezininzi eziqhelekileyo njenge ikati kunye isineyile. Uthengisa imizobo yakhe Etsy, ukuba ufuna ukwenza ngecolorcol emnandi. Ekupheleni kwenqaku sikushiya umnandi igalari ngomnye wemisebenzi yakhe.
Yonke imibala inamandla alinganayo angaphakathi, yindlela yokuyidibanisa kunye nokwenza intlantsi evuselela iimvakalelo zam. Njengoko kuchaziwe nguTilen Ti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Tilen Ti ezimangalisayo zezilwanyana zamanzi